Friedland गेट: ठेगाना इतिहास। कलिनिन्ग्राद संग्रहालय
रूसी कलिनिन्ग्राद - एक रोचक इतिहास संग एक शहर। सम्म 1946 यसलाई Königsberg भनिन्छ र जर्मनी मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक र शैक्षिक केन्द्रहरू एक थियो।
दुःखको कुरा, द्वितीय विश्व युद्ध को लड समयमा शहर को वास्तु विशेषताहरू धेरै irretrievably नष्ट गरिएको छ। तथापि, पनि सानो भनेर प्राचीन प्रेमीहरूलाई लागि ठूलो चासो रह्यो।
सबैभन्दा रोचक बीच कलिनिन्ग्राद Friedland गेट turobektov छन्। धेरै दशकसम्म, यो भवन शहर को पूर्व-युद्ध इतिहासमा समर्पित छ जो एक संग्रहालय छ।
Königsberg को फाटक
को XIII शताब्दीमा निर्मित शहर मा पहिलो गेट। पछि4शताब्दीपछि पहिलो पर्खालहरू fortifications को निर्माण मा बाहिर काम लगे थिए। यो 8 र गेट हुन्छन्। यी भवनहरु सबै काठ को गरियो देखि, 200 वर्ष पछि, तिनीहरूले धेरै बाहिर पहना छन्, र Prussia Fridrih Vilgelm राजा चौथो दोस्रो पर्खालहरू fortifications निर्माण गर्ने निर्णय गरे। पर्यवेक्षक नियुक्त architect Ernsta Lyudviga वन ट्रोल, अंग्रेजी गोथिक जागृति को शैली मा भवन को एक जटिल सिर्जना गर्न निर्णय गर्ने। Sackheim, Rossgartenskimi, Shtayndammskimi, Traghaymskimi, Ausfalskimi र Hollanderbaumskimi: पहिलो तिनीहरूले गेट एक शाही, 1843 मा आयोजित थियो, र 10 वर्ष पछि शहर छ अन्य यस्तै संरचना सजिएको थियो एक बुकमार्क भयो बनाए। Friedland र ब्रेन्डेनबर्ग: निर्माण को अन्तिम बिन्दु, लगभग 19 वर्ष दीर्घ,2नयाँ ढोकाहरू डबल आर्क डिजाइन को निर्माण भयो। पहिलो अधिक प्राचीन भवन को स्मृति मा आफ्नो नाम पायो। यो Königsberg र Friedland, अब Pravdinsk रूपमा जानिन्छ जो शहर जडान बाटोमा स्थित थियो। तिनीहरूलाई माध्यम, आधुनिक कलिनिन्ग्राद को दक्षिण-पूर्वी स्थित गाउँको प्रावधान संग रथहरूलाई चलाए।
Friedland गेट: को बीसौँ शताब्दीको इतिहास निर्माण
धेरै छोटो समय बलियो दोस्रो पर्खालहरू रक्षात्मक कार्य पूरा गर्नुभयो। प्रारम्भिक बीसौँ शताब्दीका द्वारा, यो तिनीहरूले निर्माण देखि देखा गरेको नयाँ हतियार देखि शहर रक्षा गर्न सकेनौं भनेर स्पष्ट भयो। 1910 मा, सैन्य fortifications को प्रणाली हटाइएको र नष्ट Traghaymskie, Shtayndammskie र Hollanderbaumskie गेट थिए। तीन थप यस्तो संरचना embankments, उन्नत fortifications र casemates गुमाए। पुनर्निर्माण बिना त्यहाँ मात्र Rossgartenskie र Friedland गेट थिए। तर, सडक एक चक्कर मा बाहिर थिए। एकै समयमा निर्माण मा नयाँ विशेषता छ: तिनीहरूले भव्य परिदृश्य Zuid-पार्क गर्न पैदल पहुँच को प्रारुप भएका छन्।
राखे कलिनिन्ग्राद गेट खुलने को इतिहास मा सोभियत समयमा र तिनीहरूले निर्माण भंडारगृहों राख्नुभयो। प्रारम्भिक 1990 मा, पार्क मा पानी गढ ditches सफाई गर्दा प्रारम्भिक बीसौँ शताब्दीको घरेलू वस्तुहरूको ठूलो संख्या फेला परेन। ढोकाहरूसम्म र landscaped Zuid-पार्क आफ्नो ऐतिहासिक मातृभूमि आउँदै जर्मन समूहको लागि भ्रमण कार्यक्रम को भाग भए ती वर्ष मा शहर बासिन्दा र पर्यटकहरु पेश्की लागि, सडक Dzerzhinsky, 30 साथै मा भेट्टाउनेछन् को प्रदर्शनी खुलेको छ।
भवन को विवरण
Königsberg अन्य ढोकाहरू जस्तै Friedland को अंग्रेजी वास्तुकला ट्यूडर पटक को सुविधाहरू विशेषता प्रतिध्वनिहरु कि गोथिक जागृति शैलीमा निर्माण गरेका थिए। परियोजना गरेको लेखक अज्ञात छ, तर अनुसन्धानकर्ताहरूले, सम्भवत, यो फ्रेडरिक Shtyuler छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
Friedland गेट मोहरा को पुरानो शहर को भाग मा पाँच buttresses6भागमा विभाजन गरिएको छ। तिनीहरूले सजावटी turrets को संग gable अन्त औंल्याए र battlements संग सजावटी parapet माथि protrude। सबै driveways, ढोका र Windows पोर्टल सजाया छ र नुकीला arches को रूप मा छन्।
केन्द्रीय भाग मा Friedland ढोकाहरू प्रबन्ध छन् दुई चौडाई 4.39 मिटर र उचाइ 4.24 मिटर किनाराको casemates संरचना को निर्देशन छ, र बाहिर मा -। Guardhouse। को मोहरा को गेट ग्रिड संग सजाया छ। यसलाई विभिन्न रंग को ईटाहरु को एक हीरा ढाँचा छ।
को मोहरा मा मूर्तिहरु
Friedland गेट (कलिनिन्ग्राद) को Teutonic आदेश को सबै भन्दा प्रसिद्ध महान् प्रान्तीय कमान्डर थियो जो फ्रेडरिक वन Zollern, एक मुर्ति संग सजाया थिए। दुर्भाग्यवश, मूल दोस्रो विश्व युद्ध मा लड समयमा हराएको थियो। नाइट अर्को मूर्तिकला - Marienburg मा मध्य महल स्थापित गर्ने Siegfried वन Feuchtwangen, महान् मास्टर, - गेट को बाहिर मा स्थित। यसका लेखक मूर्ति Vilgelm Lyudvig Shtyurmer छ। तिनीहरूले, 2005 र 2008 मा आयोजित थिए रूपमा यी स्मारक र आज पुनर्स्थापना काम, आफ्नो ठाउँमा लिन र कलिनिन्ग्राद सबैभन्दा फोटो खिंचवाने साइटहरू मध्ये छन्।
संग्रहालय "Friedland गेट"
अलेक्जेन्डर जी Novikov Avetisyants एला Petrovna - यसको उपस्थिति को यो सांस्कृतिक संस्थाले दुई उत्साही बाध्य छ। तिनीहरूले आधुनिक संग्रहालय, जहाँ सक्रिय सांस्कृतिक र शैक्षिक काम एउटा सानो प्रदर्शनी बारी व्यवस्थित।
2007 मा उनले3सर्वश्रेष्ठ परियोजनाहरू 2007-2008 Net लागू रूपमा पहिचान गरिएको थियो। साथै, संस्थाले प्राविधिक श्रेणी मा संग्रहालयहरु को सबै-रूसी प्रतियोगिता को विजेता घोषणा गरिएको छ।
पहिलो प्रदर्शनी "पर्खालले घेरिएको शहर" भनिन्छ। पर्यटकहरू6मिनेट फिलिम र familiarity हेर्दै जानकारी खडा संग द्वारा Königsberg को इतिहास को पृष्ठ मार्फत छोटो भ्रमण गर्न निमन्त्रणा छन्। त्यसपछि तिनीहरूले प्रदर्शनी को दोस्रो भाग घरहरुमा जो ठूलो हल, आमन्त्रित र पूर्व-युद्ध शहर मार्फत भर्चुअल पैदल आयोजना गरिन्छ। यो primed खुलने projecting द्वारा भर्चुअल, सिर्जना मा गर्नाले, गेट भित्र संरक्षित गरिएको छ जो एक वास्तविक bruschatoy सडक, साथ सुरु हुन्छ। तीन प्रोजेक्टर वास्तविक संसार र पर्खाल "सफाई" को सीमाहरु धक्का, एक अप्टिकल भ्रम सिर्जना गर्नुहोस्। creaking गाडियां, छोराछोरीलाई हाँस्न र छक्क महिला एडी देख: ध्वनि प्रभावहरू संलग्न भइरहेको छ के को पनि ठूलो शुद्धता। प्रारम्भिक XX सताब्दी, बगैचा शहर रूपमा जानिन्छ, र "जर्मन एटलान्टिस" - Königsberg लेट XIX हस्तान्तरण यी ध्वनि sightseers अन्तर्गत।
प्रकाश र ध्वनि शो ठीक एक घण्टा रहन्छ। यो समयमा सहभागीहरू जो, दुर्भाग्यवश, वास्तविक जीवनमा त्यहाँ केही छ बायाँ Königsberg, को ऐतिहासिक केन्द्र मार्फत पर्यटन निर्देशित छन्। त्यहाँ तिनीहरूले प्रदर्शन अवस्थामा क्याफे, पसलहरूमा र औषधि पसल मा "ड्रप", र पुरानो pergola मार्फत पुल साक्षी। भर्चुअल भ्रमण को समाप्तिमा, पर्यटकहरु पूर्व fortifications को साइटमा प्रारम्भिक बीसौँ शताब्दीमा राखे थियो जो एक वास्तविक पार्क, आफूलाई पाउन, र कलिनिन्ग्राद क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य आनन्द।
"इको युद्ध को" एक्सपोजर
संग्रहालय "Friedland गेट", आगंतुकों द्वितीय विश्व युद्ध को समयमा बम आश्रय शैली कोठा मा भएको भएको thrill, relive गर्न सक्नुहुन्छ। अडियो-भिजुअल प्रदर्शनी "युद्ध को इको" त्यहाँ तैनाथ। यो कारणले गर्दा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न आधुनिक दृष्टिकोण र प्रकाश, ध्वनि र अप्टिकल प्रभाव को सक्रिय प्रयोग गरेर प्रतिष्ठित छ।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, Friedland गेट (ठेगाना: Dzerzhinsky, 30) Teutonic क्रम प्रतीक सजाया गरिएको छ। साथै, तिनीहरूले आफ्नो प्रमुख प्रतिनिधिहरु को मूर्तिहरू स्थापना गरेका थिए छन्। यसलाई आज संग्रहालय मा एक प्रदर्शनी, हतियार र हतियार को पुनर्निर्माण देखाउँदछ Teutonic आदेश, को Knights समर्पित निर्मित पुरानो प्रविधिहरू अनुसार कुनै दुर्घटना हो।
सभ्यता र सीवरेज
समयमा, Koenigsberg को Prussian शहर जर्मनी मा सबै भन्दा सहज शहर र बाल्टिक क्षेत्रको एक मानिन्थ्यो। केंद्रीकृत ढल प्रणाली त्यहाँ रूसी साम्राज्यको सबैभन्दा शहर भन्दा धेरै पहिले देखियो। संग्रहालय Friedland गेट भित्र, आगंतुकों आधुनिक उपयोगिता को यो महत्त्वपूर्ण घटक समर्पित गर्ने प्रदर्शनी हेर्न आमन्त्रित गरिन्छ संचालित। यो तेस्रो सहस्राब्दी ई.पू. को बीचमा सिर्जना प्राचीन ढल प्रणाली को कहानी, बताउँछ। ई। पानी मध्ययुगीन युरोप र रूस को तरिका प्राचीन रोम मा पाइपलाइन मा, पाकिस्तान स्थित Mohenjo-Daro शहर, साथै मा। पर्यटकहरु पनि विश्व शौचालय संगठन बारे रोचक जानकारी सिक्न हुनेछ, र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस शौचालय रूपमा नोभेम्बर 19 घोषणा गरे।
संग्रहालय "Friedland गेट" (ठेगाना हेर्नुहोस्। माथि) एउटै नाममा प्रदर्शनी एक dilapidated ब्रिटिश वायु सेना आइपुगे र सेना तुरुन्तै युद्ध पछि सबै सोभियत संघ देखि लाल कलिनिन्ग्राद stormed गर्ने पहिलो settlers, समर्पित छ। संग्रहालय आगंतुकों अपरिचित क्षेत्रमा अन्वेषण गर्न आउन जो शहर मान्छे, साथै केही कसरी हेर्न देखाइने परिवार heirlooms तिनीहरूले तिनीहरूलाई ल्याए। साथै, तिनीहरूले Crosses र तह प्रतीक हुन्छन् जो उपासनाको लागि प्रयोग वस्तुहरु को कलाकार आर Borisovas को काम र संग्रह हेर्नुहोस् हुनेछ।
शहर मा पर्यटकहरु भ्रमण रुचि राख्नु हुनेछ कि धेरै रोचक वस्तुहरु छन्। यी एक कला, "गुण एन 5", अम्बर र यो सामाग्री बनाइएका उत्पादन, र अरूको संग्रह समावेश गर्नुहोस्। वास्तवमा, तिनीहरू धेरै पूर्व fortifications मा अवस्थित छ। उदाहरणका लागि, समकालीन कला लागि केन्द्र XIX शताब्दीमा निर्मित यो छाउनी "क्राउन प्रिन्स", को टावर शरण पाइएन छ।
अब तपाईं जहाँ Friedland गेट थाहा छ। कलिनिन्ग्राद - एक धनी इतिहास र धेरै आकर्षण संग शहर। आफ्नो यात्रा संग पक्कै लायक एक पुरानो Königsberg समर्पित संग्रहालय भ्रमण गर्न, सडक Dzerzhinsky, 30 मा यात्रा हो।
Volkovskoye चिहान - इतिहास र प्रस्तुत
Columbarium - चिहानहरू नयाँ ढाँचामा
Hedonism - यो एक जीवन शैली, वा समाजलाई चुनौती हो
Manor Saltykov: इतिहास र विवरण
पुरुष क्रूरता - एक brute शक्ति वा प्राकृतिक?
बच्चाहरु सपना achievable छ: क्यामेरा संग आर सी हेलिकप्टर
फड्को वर्ष: क्यालेन्डर सूची। अर्को फड्को वर्ष कहिले हो?
फूल गोल्डेन बल - रसदार सागहरु मध्ये उज्ज्वल स्प्वाश
जीवनी Galustjana माइकल - देश को सबै भन्दा राम्रो हास्य अभिनेता
साना व्यवसाय आपूर्ति मा घोषणा: नमूना
Nise जेल - दबाइ को विवरण
कोलैजेन अनुहार क्रीम: प्रभाव समीक्षा